Mauricio Pochettino Oo Ka Hadlay Mustaqbalka Xidiga Farance Iyo PSG Kylain Mbappe.
Home Horyaalka France Mauricio Pochettino oo ka hadlay mustaqbalka Xidiga Farance iyo PSG Kylain Mbappe.
Mauricio Pochettino wuxuu aaminsan yahay in Kylian Mbappe mustaqbalkiisa aan la hubin in dhawaan la cadeyn doono ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in weeraryahanka superstar uu ka tagayo Paris Saint-Germain xagaaga soo socda.
Xiddiga heerka caalami ee dalka France Mbappe ayaa ku tuuray Camp Nou seddexleey si uu u burburiyo Barcelona kulankii ay 4-1 kaga badiyeen Champions League wareega 16ka kulankii ugu danbeysay.
Ka dib qaab ciyaareedkiisii fiicnaa, 22 jirka ayaa yiri: Waa doqonnimo inaan go’aan ka gaaro mustaqbalkeyga hal ciyaar taasoo dhalisay wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan qorshihiisa muddada dheer ee kooxda uu ku dhashay.
Qandaraaska Mbappe wuxuu dhacayaa bisha Juun 2022 iyadoo qaar ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Yurub lagu xamanayo inay doonayaan ineey la wareegayaan haddii kooxda heysata horyaalka Faransiiska aysan ku xiri karin ku guuleysiga Koobka Adduunka heshiis cusub.
Guuldarradii sanadkii hore ka soo gaartay finalka Champions League PSG ayaa haatan ku jirta kaalinta labaad ee Ligue 1, tababaraha reer Argentine Pochettino ayaa aaminsan in Mbappe uu ku guuleysan karo dhamaan Parc des Princes.
PSG waxay siin kartaa Mbappe dhammaan aaladaha uu u baahan yahay si uu ugu farxo ayuu Pochettino u sheegay barnaamijka Raadiyaha Catalunya ee Tot Costa.
Waxaan u maleynayaa in dhowaan la caddeyn doono.
Mbappe ayaa dhaliyay 21 gool 29 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay 116 gool afartii xilli ciyaareed ee uu ku sugnaa caasimada France tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay Monaco bishii Ogosto 2017.
“Shaki kuma lihin in Kylian uu yahay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu waa weyn adduunka inkasta oo uu yaraa ayuu yiri Pochettino ka dib guushii ay ka gaareen kooxda reer Catalans.
Previous articleMikel Arteta oo ka hadlay barbarihii kooxdiisa la gashay kooxda Benfica koobka Europe League.
Next articleEverton oo isha ku heysa Qadka dhexe ee kooxda Juventus Adrien Rabiot.